मान्छेलाई धाकधम्की दिएर अनि तर्साएर नेपालको स्वाधिनतामाथि कुठाराघात गर्न पाइन्छ ? - डा. भीमबहादुर रावल (अन्तवार्ता) - हरियाली नेपाल
मान्छेलाई धाकधम्की दिएर अनि तर्साएर नेपालको स्वाधिनतामाथि कुठाराघात गर्न पाइन्छ ? – डा. भीमबहादुर रावल (अन्तवार्ता)
Post published:२९ भाद्र २०७८, मंगलवार २३:५३
हाम्रो अमेरिकासँग के शत्रुता छ र ? खेलाँची हो की होइन भनेर हामीले किन भन्ने ? कति देशमा सेना आएर कब्जा गर्याे । ७० वर्षसम्म लडेर शक्तीहरुलाई हराएका हामीले देखाएका छैनौ ? हामी नलिउन न ३ वर्ष । के हुँदो रहेछ नेपालमा ? तीन वर्षसम्म जसले निस्वार्थ रुपमा सहयोग गर्छन् त्यसलाई अघि बढाउँ । त्यसपछि हाम्रो साधनस्रोत जति छ, त्यति गरौं । के हुँदो रहेछ हेरौ न ? मान्छेलाई धाकधम्की दिएर अनि तर्साएर नेपालको स्वाधिनतामाथि कुठाराघात गर्न पाइन्छ ?
संसदलाई बन्धक बनाउने कुरा भएन । त्यहाँ केही अन्तरविरोधहरु रहेका छन् । नियम र कानूनका विषयहरु उठेका छन् । अब यस्तो कुराहरुमा सभामुखलगायत सबैले आपसमा बसेर त्यसको उचित निकास निकाल्नुपर्छ । हाम्रो प्रतिनिधीसभा, हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम हाम्रो हो । यदि यो संसद्ले निकास पाउन सकेन, हामीले जिम्मेवार भुमीका खेल्न सकेनौ भने कस्ले निकास दिन्छ त ? प्रतिनिधिसभा भनेको त नेपाली जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ हो । अहिले त सबै राजनीति मुद्दाहरु अदालतमा लगेर अब अदालतले देश चलाउने दिशातर्फ देश जाँदैछ । यस्तो भयो भने संसद्को औचित्य समाप्त हुन्छ । त्यसैले हामी सबै मिलेर लाग्यौं भने संसद् बन्धक हुँदैन् । -रिपोटर्स नेपाल
सुडानलाई आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्रहरूको सूचीबाट हटाउने अमेरिकी तयारी
४ कार्तिक २०७७, मंगलवार २२:५४
मुख्यमन्त्री फेरिने हल्लामा कुनै सत्यता छैन – मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल
८ भाद्र २०७७, सोमबार ००:३१
प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउने भन्ने कुरामा मेरो असहमति नै हो – हरिबोल गजुरेल
६ भाद्र २०७७, शनिबार १८:२१
माधव नेपालले त विपक्षीसँग मिलेर पार्टीविरुद्ध घात गरेको त तपाँई हामी सबैले चश्मा लगाउन पर्दैन नि ? – केपी शर्मा ओली (अन्तवार्ता)
५ भाद्र २०७८, शनिबार ००:५१